Ukuphupha ngeJaguar Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga neJaguar
Izwekazi laseMelika likhaya lejaguar. Namhlanje, nangona kunjalo, irhamncwa lifumaneka ikakhulu kuMbindi nakuMzantsi Merika, apho lihambahamba kwihlathi elinemvula laseAmazon. I-jaguar yifeline yesithathu ngobukhulu emhlabeni emva kwengonyama nengwe kwaye ifana kakhulu nengwe kwinkangeleko yayo yangaphandle. Kodwa nokuba zimbini ziyazalana, ukudibana phakathi kwezi zibini akunakulindeleka, njengoko ingwe izalelwa eAfrika naseAsia.
Ijaguar inoboya obumdaka-butyheli obugqunywe ngamabala ajikelezileyo, nangona kunjalo, awunakuze ufane kwaphela kolunye uhlobo. Ijaguar nganye, ngokungathi kunjalo, yahlukile. IiJagars zizodwa kwaye zihlala kwindawo emiselweyo, kuxhomekeke kubuninzi bexhoba. Ngobungakanani bomzimba obufikelela kwiimitha ezimbini kwaye phantse i-100 kilograms, ikati enkulu inembonakalo entle, isondla ikakhulu kwizilwanyana ezikhulu ezifana nexhama, i-capybaras kunye ne-armadillos. Kuba i-jaguar inezona zinamandla kuwo onke amarhamncwa, ihlala ibulala ixhoba layo ngokuluma kube kanye kunye ne-canines yayo ende.
Igama elithi "Jaguar" liyaziwa nangathi ngokusebenzisa i-automaker yokuthambisa enegama elifanayo, uphawu lwayo olubonisa ikati enkulu ngexesha lokutsiba ngendlela yobuhle. Funda ngakumbi malunga nokutolika iphupha lemoto ngokukhawuleza apha.
1 Uphawu lwephupha «iJaguar» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «iJaguar» -Ukuchazwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iJaguar» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iJaguar» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Uphawu lwephupha lwejaguar lufumaneka kutoliko jikelele lwephupha lobufazi, apho kuvela khona amandla awomeleleyo, ngendlela efanayo nomfanekiso wephupha Ukuqala kwento entsha Kodwa kanye njengokuba ijaguar imele ukuba lilolo ngaphakathi el mundo okwenyani, idlulisa njengomfanekiso wephupha kwabo baphupha ezo ndawo zobuntu babo.
Ukuba woyika ikati enkulu ephupheni lakho, uyayoyika ebomini bokuvuka. ukungonwabi kunye noloyiko lokuba wedwa. Ukuba usondela kwi-bobcat ngokuzithemba nokungoyiki, uyazi amandla ayo naxa uvukile kwaye akukho nto inokuyiphambukisa kwindlela yayo.
Enye inkalo yokutolika ibona iphupha lejaguar njenge Isilumkisoukugcina ukubanakho kobundlongondlongo kujongiwe kwaye ungazibeki ngokukhohlakeleyo iimfuno zomntu ngaphezulu kwezabanye abantu. Umphuphi akufuneki asebenzise amandla anawo ukonzakalisa abanye abantu kwaye azibeke ngaphezu kwabo.
Nangona kunjalo, i-jaguar yamaphupha akho inokubonisa ngokuchaseneyo ngqo, okt umnqweno wokuzithemba ngakumbi kunye nentlonipho kwabanye.
Uphawu lwephupha «iJaguar» -Ukuchazwa kwengqondo
Elinye icala lokuchazwa kwamaphupha libona kwinqanaba lengqondo kumfanekiso wephupha wejaguar ubudlelwane obusondeleyo kunye nabo. Shoot y Ithuku lomchamo. Ngokukodwa, amaphupha erhamncwa abonisa icala elinamandla lesini sethu. Apha kwahlulwa ukuba indoda okanye umfazi ufumene eli phupha:
Indoda kufuneka iqonde amava ephupha njengesimemo sokulawula iminqweno kunye neminqweno kwaye, nokuba kunzima, ukuzibamba ngesidima kwaye ungangxami ngokungxama. Oku akuthethi ukuba awukwazi ukubonisa uthando lwakho, kodwa kuya kufuneka ukhulise umbono wexesha elifanelekileyo.
Ukuba umfazi udibana nejaguar ephupheni, oku kuyomeleza icala lakhe lobufazi ezingqondweni zakhe. Iimvakalelo ezinzulu Inkanuko y i-nostalgia bafuna indlela yabo kumphezulu ngephupha elikhulu lekati kwaye bafuna ukuhlala kwinqanaba lokuqonda.
Uphawu lwephupha «iJaguar» - ukutolika kokomoya
Xa itolikwa ngokomoya, i-jaguar ifanekisela iphupha elingaphakathi elomeleleyo. okwakhiwaIntuitive Conocimiento kwaye ikhuthaza umphuphi ukuba athembele kubulumko bakhe.
Ukuphupha ngomngcelele womngcwabo